Ukuphumla kweDevonport @ Manning
Yakhelwe kwiminyaka engama-60 kwaye yahlaziywa kutshanje, i-16 Manning yindawo yokuphumla yokuphumla emva kosuku oluxakekileyo lweshishini okanye ukujonga imisebenzi emininzi kunxweme oluseMntla-ntshona nangaphaya.
Iibhedi ezintle zesikhumba zaseTaliyane, i-intshi engama-55 ye-smart TV, iibhedi ezitofotofo, kunye nekhitshi langoku elinombono wolwandle sisiqalo nje.
Indawo efanelekileyo kakhulu, ibekwe kwinduli ejonge indawo yeDevonport. Indlu ibamba ilanga imini yonke, kwaye inika imvakalelo yasekhaya. Igumbi lokuphumla libanzi kwaye lifakwe ngokumnandi kwezo mvakwemini zonqena. Ukuba ilanga alikho ngaphandle, phosa impompo yobushushu kwaye uzigcine ukhululekile.
Kukho okuninzi okunikezwayo ngaphakathi kwendawo yasekhaya nangaphaya. I-Devonport kule minyaka imbalwa idlulileyo iye yasinyusa isibheno sayo kwabo bafuna ikofu elungileyo kunye neeresityu ezibonelela ngemveliso entle yasekhaya. Ubuninzi beelwandle zokugcina abantwana bonwabile ngexesha lasehlotyeni, okanye inja ebusika..okanye zombini! Intaba iCradle luhambo oluhle kakhulu losuku, iLeven Canyon iyamangalisa, kwaye ngokuhlwa kukho iindawo ezimbalwa zokubukela iipenguin ezibhadula elunxwemeni, ezifana neLillico Strait kunye neHawley Point. Ukukhwela ibhayisekile eNtabeni kuyakhawuleza ukuba lukhetho kunye nenqanaba lokuqala leProjekthi yaseWild Mersey egqityiweyo. Ukuntywila, ukusefa, ukuloba kwakhona kuyintandokazi yonxweme xa iimeko zemozulu zifanelekile.
Njengoko ndiphakathi kwe-NZ kunye ne-Oz, andizukufumaneka ngokubanzi ukuba ndinxibelelane, ngoko ke yonwabele imfihlo yakho yokubaleka okwexeshana.